KIA နှင့် မူဆယ်တွင် ဆွေးနွေးရန် တပ်မတော် ထပ်မံကမ်းလှမ်း ~ Myanmar Express
KIA နှင့် မူဆယ်တွင် ဆွေးနွေးရန် တပ်မတော် ထပ်မံကမ်းလှမ်း
From : ခေတ်လူငယ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်း ကြောင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် စတုတ္ထအကြိမ် ဆွေးနွေးရန် အစိုးရတပ်မတော်က ထပ်မံကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာ ပြောကြားခဲ့သည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စစ်ဦးစီးချုပ်များ ဇူလိုင်လဆန်းတွင် ဗန်းမော်မြို့၌ ဆွေးနွေးရန် အစိုးရတပ်မတော်က ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း တိုက်ပွဲများကြောင့် ကေအိုင်အေမှ လက်ခံခြင်း မရှိဘဲ လွယ်ဂျယ်မြို့အနီးရှိ မိုင်ဂျာယန်ဒေသ၌သာ ဆွေးနွေးရန် ပြန်လည် ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းကိုလည်း အစိုးရတပ်မတော်က လက်မခံသည့်အတွက် အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ တစ်နှစ်ကျော်ကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသော ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် သုံးကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ “နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းပေါ် မရောက်သေးတာက ရှေ့တန်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စစ်ဦးစီးချုပ်တွေ ပါဝင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်ဖို့နေရာကို ညှိနှိုင်းနေတာပါ။ မူဆယ်မှာတွေ့ဖို့ လောလောဆယ် ကေအိုင်အေက အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး” ဟု ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာက ဆိုသည်။ ယင်းတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တပ်မတော် ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းနှင့် ကေအိုင်အေ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ ဦးခွန်းအောင်က ပြောကြားသည်။ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့မှ အငြိမ်းစား အကြီးအကဲတစ်ဦးက “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ များလာရင် သေနတ်သံတွေ တိတ်သွားမှာပါ” ဟု လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးသည်။ အစိုးရ တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့အကြား ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၆၀၀ ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လအတွင်းတွင် တိုက်ပွဲပေါင်း ၆၀ ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကေအိုင်အေ၏ စာရင်းဇယားများအရ သိရသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ Myanmar Express
Posted in: တိုက်ပွဲသတင်း,သတင်း
15 July 2012 13:56
The whole world is watching Myanmar, there is only one group KIA left for peace, KIA must stop doing as terrorists and you must accept peace resolution with Tatmadaw as soon as possible. As soon as Myanmar will get peace and all Nationals will be united in the whole country, Myanmar will be bright and shine and richer and richer soon.
16 July 2012 07:38
အမေရိကန်နဲ့အဆင်ပြေနေပြီ ဆိုတာသတိရပါ။ တော်ကြာလိုင်ဇာပေါ်ကို မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေရောက်လာအုံး မယ်။ အဲဒီတော့မှ ဆွေနွေးရင် သိပ်နောက်ကျနေပြီ။
16 July 2012 07:39
၂၀၀၇ မှာ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်လို့ သူရဲကောင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဟာ ၂၀၁၃ မှာ သာသနာကို ကာကွယ်မှ အကြမ်းဖက်သမား ဖြစ်ရတယ်..။။ လက်ပံတောင်းက သံဃာတော်...